एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा प्रकाश ज्वालाको दाबी – Ujyaaloraibar
उज्यालो रैबार	। २०७८ आश्विन ७, बिहीबार ०९:२८
७ असोज, काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज पार्टीको महासचिव, स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरु टुंगो लगाउँदै छ, जसमा कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज प्रकाश ज्वालको पनि दाबी रहेको छ ।
महासचिवमा अन्य डा. वेदुराम भुसालको सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएको छ । महासचिवका लागि प्रकाश ज्वालासँगै डा.वेदुराम भुसाल, मुकुन्द न्यौपाने, राजेन्द्र पाण्डे, गंगालाल तुलाधर, डा. विजय पौडेललगायतले दाबी गरेका छन् ।
पार्टी संरचनालाई पूर्णता दिन गत मंगलबारदेखि केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको थियो । आज बैठक सक्ने योजना छ । केन्द्रीय कमिटीको संख्या अनुसार पोलिटव्युरो र स्थायी कमिटी सदस्यहरु टुंगो लगाइने छ । केन्द्रीय कमिटीको एक तिहाइ पोलिटव्युरो र पोलिटव्युरोको एक तिहाइ स्थायी कमिटी सदस्य हुने छन् ।
हाल स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित मुकुन्द न्यौपाने, डा. वेदुराम भुसाल र प्रमेश हमाल छन् ।
एकीकृत समाजवादीले यसअघि प्रदेश इञ्चार्जहरु तोकेको थियो । प्रदेश १ मा घनेन्द्र बस्नेत, प्रदेश २ मा धर्मनाथ साह, बागमती प्रदेशमा केदार न्यौपाने, गण्डकी प्रदेशमा केशवलाल श्रेष्ठ, लुम्बिनी प्रदेशमा भागवत विश्वासी र कर्णाली प्रदेशमा प्रकाश ज्वाला इञ्चार्ज छन् । सुदूरपश्चिमको इञ्चार्ज भने तोक्न बाँकी छ ।
यसैगरी उपत्यका विशेष प्रदेश इञ्चार्ज विश्वनाथ प्याकुरेल, सम्पर्क विशेष प्रदेश इञ्चार्ज विजय गुरुङ र मोर्चा इञ्चार्ज डा। विजय पौडेल छन् ।
आज बिहान ११ बजे बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी महासचिव टुंगो लगाउनुका साथै केन्द्रीय कमिटीको संख्या तोक्ने सम्भावना रहेको एक नेताले बताए ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ। एकीकृत समाजवादीको काठमाडौंमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गर्न लागेको हो।एकीकृत समाजवादीको महासचिवमा बेदुराम भुसाल चयन भएका छन्। त्यसैगरी उपमहासचिवमा प्रकाश ज्वाला, गंगालाल तुलाधार र विजय पौडेल चयन भएका छन्। राजेन्द्र पाण्डे, प्रमेश हमाल, धर्मनाश शाह र जयन्ती राई […]